Waa ayo Khabiirada Cilmi-nafsiga ee Kiliinikada ah ee ugu mushaarka badan? | 10-ka waddan ee ugu sarreeya
Bogga ugu weyn Waa ayo Khabiirada Cilmi-nafsiga ee Kiliinikada ah ee ugu mushaarka badan? | 10ka wadan ee ugu sareeya 2022
Waa ayo Khabiirada Cilmi-nafsiga ee Kiliinikada ah ee ugu mushaarka badan? | 10ka wadan ee ugu sareeya 2022
Ugaarsi Wacan waa filim ku saabsan ilaaliyaha da'da yar ee MIT oo lagu magacaabo Will Hunting kaas oo hibo gaar ah u lahaa xisaabta laakiin isma caawin karo isagoo dareemaya lumay iyo jiho la'aan. Filimku waxa kale oo uu diiradda saarayaa caawimada uu dhakhtarka cilminafsigu u fidiyo ilaaliyahan si uu uga caawiyo inuu macno u yeesho naftiisa iyo hadiyadda uu haysto.
Kuwa daawaday filimka, filimku waa sawir ku habboon waxa ay cilmi-nafsigu dadka u qabtaan - caawimo. Dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ayaa halkaas u jooga inay dadka ka caawiyaan inay ka soo noqdaan meel kasta oo mugdi ah oo ay joogaan.
Dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee bukaan-socodka waxay ku takhasusaan cilmi-nafsiga aan caadiga ahayn, taas oo ka duwan noocyada kale ee cilmi-nafsiga. Halka qaar ka mid ah cilmu-nafsiga kiliinikada ay daaweeyaan cudurro maskaxeed iyo dabeecado kala duwan, qaar kalena waxay ku takhasusaan hal cillad, sida schizophrenia.
Marka ay timaado faraqa u dhexeeya cilmu-nafsiga kiliinikada iyo takhtarka cilmi-nafsiga, waxaa badanaa jira xoogaa isfaham la'aan ah. Jahwareerka dartiis, qaar gargaar raadis ah ayaa ku dhammaatay inay ballan la yeeshaan khabiir khaldan.
Dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee kiliinikada waxay ka shaqeeyaan goob aad u khaas ah. Waxay u shaqayn karaan cilmi-baarayaal ahaan xaalad akadeemiyadeed ama daaweeyayaal goob caafimaad ama gaar ah, iyagoo la shaqeynaya macaamiisha. Ahaanshaha teraabiyada cilminafsiga, dhanka kale, waxa laga yaabaa inay keento hawlo kala duwan sababtoo ah weedha ayaa ka badan erey dallad oo si weyn loo adeegsan karo.
Maqaalkani waxa uu sharxayaa waxa uu cilmi-nafsiga kiliinikada ku saabsan yahay, yaa noqon kara cilmu-nafsiga bukaan-socodka, muddada ay qaadanayso in la mid noqdo, iyo halka ay joogaan dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee ugu mushaharka badan?
Waa maxay Cilmi-nafsiga Caafimaadka?
Cilmi-nafsiga bukaan-socodka waa laan cilmi-nafsi oo siiya dadka iyo qoysaska daryeel caafimaad maskaxeed iyo dabeecadeed oo socda oo dhamaystiran, iyo sidoo kale la-talinta hay'adaha iyo bulshada, tababarka, barida, iyo kormeerka, iyo dhaqanka cilmi-baarista ku salaysan.
Waa takhasus ballaadhan oo ka kooban cilmi-nafsiyeed daran oo lagu kala saaro dhammaystirka iyo is-dhexgalka aqoonta iyo kartida qaybaha kala duwan ee cilmi-nafsiga gudaha iyo dibaddaba. Cilmi-nafsiga bukaan-socodka waa goob ballaaran oo ay ku jiraan dadka da'aha kala duwan, qowmiyadaha, iyo nidaamyada.
Muxuu Sameeyaa Cilmi-nafsiga Kiliinikada?
Dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee bukaan-socodka waxay qabtaan dhowr hawlood, oo ay ka mid yihiin;
Qabashada waraysiyada macmiilka si loo go'aamiyo filashadooda iyo waxa ay rabaan
Aqoonsiga dhibaatooyinka nafsiyeed, shucuureed, iyo dabeecadeed
Isticmaalka baaritaanka nafsiga ah si loo qiimeeyo dabeecadda, dhaqanka, iyo kartida macmiilka
Go'aaminta jiritaanka cillad maskaxeed, shucuureed, ama dabeecadeed
Abuuritaanka barnaamijyada wax ka beddelka dabeecadda ka dib marka la go'aamiyo dhibaatada macmiilka
Abuuritaanka, horumarinta, iyo hirgelinta daaweynta shakhsi ahaaneed ee macmiilka ama daaweynta
Isticmaalka agabka cilmi nafsiga ee kala duwan si loo wanaajiyo xaalada macmiilka
Ka caawinta macaamiisha qeexidda ujeeddooyinkooda iyo dejinta istaraatiijiyad lagu gaarayo ujeedooyinkaas
La socoshada horumarka macmiilka iyada oo loo marayo fadhiyada daawaynta caadiga ah
Dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee kiliinikada qaarkood ayaa laga yaabaa inay doortaan inay diiradda saaraan cilmi-baarista halka kuwa kalena ay dooran karaan inay si toos ah ula shaqeeyaan bukaanka. Tani kama dhigayso qof ka hooseeya ama ka hooseeya kan kale.
Immisa sano ayay ku qaadataa in aad noqoto cilmi-nafsi yaqaan kiliinikada ah?
Si aad u noqoto dhakhtar cilmi-nafsi, waxaad u baahan doontaa shahaado jaamacadeed (afar ilaa shan sano oo kuliyad) oo lagu daray shahaado doctorate (afar ilaa todoba sano oo dugsi qalin jabin ah). Aaggan takhasuska leh, dadka intooda badan waxay ku qaadan doonaan inta u dhaxaysa siddeed ilaa 12 sano waxbarashada sare.
Waxa jira xirfado kale oo cilmi-nafsiga ah oo aan u baahnayn sannado badan oo waxbarasho ah. Shahaadada mastarka, waxaad noqon kartaa daaweeyaha guurka iyo qoyska oo shahaado haysta, kaas oo qaadan doona laba ilaa saddex sano oo daraasad qalin jabin ah si aad u bilowdo safarka si aad u noqoto mid ka mid ah dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee ugu mushaharka badan.
Halkee ka Shaqeyn karaan Dhakhaatiirta Cilmi-nafsiga ee Kiliinikada?
Dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee kiliinikada waxay ka shaqeyn karaan tiro warshado iyo waaxyo ah;
Xarumaha daaweynta caafimaadka dhimirka
Dhaqanka gaarka ah
Intee le'eg baa la bixiyaa Khabiirada Cilmi-nafsiga ee Kiliinikada?
Dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee kiliinikada waxay kasbadaan celcelis ahaan mushahar sanadle ah $82,180, sida ku cad Buug-gacmeedka Muuqaalka Shaqada ee ugu dambeeyay ee Xafiiska Tirakoobka Shaqada ee US 2020 (BLS) Buug-gacmeedka Muuqaalka Shaqada.
Mushaharka dhabta ahi aad buu u kala duwan yahay iyadoo ku xidhan takhasuska aagga, juqraafiga, sannadaha waayo-aragnimada, iyo shuruudo kale oo kala duwan, taasi waa haddii noqoshada cilmi-nafsi yaqaanka ugu mushaharka badan waa wax aad raadinayso.
10ka waddan ee ugu mushaharka badan cilmi-nafsiga kiliinikada.
Danmark waa waddan dhab ah oo la yaab leh. Nasiib wanaag, dad badan oo buka ayaa si wax ku ool ah loo daweeyaa waxayna ku noolaan karaan nolol buuxda, farxad leh taas oo ay ugu wacan tahay nidaam daryeel caafimaad oo heer caalami ah kaas oo isticmaala qiyaastii 6% GDP.
Xagga waxbarashada, Danmark aad baa looga tixgaliyaa dhinacyada dhaqaalaha iyo cilmiga sayniska, ardayduna waxay dalban karaan lacag bille ah si ay xoogga u saaraan waxbarashadooda. Celceliska mushaharka sanadlaha ah ee dhakhaatiirta cilmu-nafsiga ee Danmark waa $43,688 iyo dhakhtar cilmi-nafsi oo heer sare ah (8+ sano oo waayo-aragnimo ah) ayaa qaata celcelis ahaan mushahar dhan $77,256.
Sababtoo ah cabbirkeeda yar, Nederlaan waa dalka ugu dadka badan Yurub, oo ay ku nool yihiin in ka badan 17 milyan oo qof laga bilaabo Luulyo 2019. Waxay leedahay cufnaanta dadweynaha 508 qof kiiloomitir laba jibaaran. Boqortooyada Ingiriiska, marka la barbardhigo, waxay leedahay cufnaanta dadweynaha 277 qof oo keliya kiiloomitir laba jibaaran.
Randstad, oo ay ku jiraan magaalooyinka Amsterdam, The Hague, Rotterdam, iyo Utrecht, ayaa hoy u ah qiyaastii 45 boqolkiiba tirada guud ee dadka Nederlaan. Celceliska mushaharka sannadlaha ah ee dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee Nederlaan waa $46,555 iyo cilmu-nafsi yaqaan heer sare ah (8+ sano oo waayo-aragnimo ah) wuxuu kasbaday celcelis ahaan $ 82,011.
Dalka ugu booqashada badan aduunka iyo kan labaad ee ugu badan ee isticmaala khamriga aduunka, France waxa uu leeyahay shakhsiyaad badan. Marka la eego tirada waxyaabaha ay sameeyaan iyo nooca dadka ku nool halkaas, dhakhaatiirta cilmu-nafsiga waxay runtii u baahan yihiin inay dadka dejiyaan mar kasta haddii aad ogtahay waxaan ula jeedo.
Celceliska mushaharka sannadlaha ah ee dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee Faransiiska waa $61,132 iyo cilmu-nafsiga heerka sare (8+ sano oo waayo-aragnimo ah) wuxuu kasbaday celcelis ahaan $ 75,768.
Noorway, oo loo yaqaan Boqortooyada Norway, waa waddan Scandinavian ah oo ku yaal gobolka Waqooyiga Yurub. Waad ku mahadsan tahay inaad barato mid ka mid ah wadamada Yurub ugu buuraleyda ah, oo loo yaqaan fjord-yada xiisaha leh iyo dadka bannaanka deggan.
Haddii aad qabtid walaacyo dhexdhexaad ah ama dhexdhexaad ah, dhakhtarkaaga guud (GP) ee Norway wuxuu caadi ahaan isku dayi doonaa inuu ku caawiyo marka hore. Waa fikrad wanaagsan inaad ka fikirto waxaad rabto ka hor inta aanad u dhowaan dhakhtarkaaga. Ma jiraan wax agab ah oo bulshadaada ah oo kaa caawin kara inaad wax ka qabato arrimaha caafimaadka dhimirka? Degaano badan ayaa bixiya xiisadaha maareynta niyad-jabka ama walbahaarka.
Ururka Norwey ee cilmi nafsiga (NFP) waxa uu ka kooban yahay ilaa 500 oo xubnood waxaana la abuuray 1998. Intaa waxa dheer, iyada oo aan si rasmi ah loo aqoonsanin xirfadda teraabiyada cilminafsiga ee Norway, tiro aan la garanayn oo xirfadlayaal ah ayaan ka diiwaan gashanayn NFP.
Celceliska mushaharka sannadlaha ah ee dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee Norway waa $79,646 iyo cilmi-nafsi yaqaan heer sare ah (8+ sano oo waayo-aragnimo ah) ayaa qaata celcelis ahaan $98,761.
Kanada waa dalka labaad ee adduunka ugu weyn, baaxaddiisu waa 9.1 milyan oo kiiloomitir laba jibaaran. Kanada waxay ku taal qaybta sare ee Waqooyiga Ameerika, oo leh saddex badood oo kala qaybiya: Pacific, Atlantic, iyo Arctic.
Dhab ahaantii, Kanada waxay leedahay xeebta ugu dheer adduunka. Dhinaca koonfureed, Kanada iyo Maraykanku waxa ay wadaagaan xuduud dhuleed oo dhan 9,000 kiiloo mitir. Taasi waa xuduudka adduunka ugu dheer! Inta badan dadka Kanadiyaanka ah waxay ku nool yihiin meel dhawr boqol oo kilomitir u jirta soohdinta Maraykanka.
Shuruudaha diiwaangelinta, shatiga, shahaadaynta, ama kiraynta cilmi-nafsiga ahaan bixinta adeegyada cilmi nafsiga way kala duwan yihiin gobol ilaa gobol Kanada. Haysashada shahaadada mastarka ama dhakhtarka ma dammaanad qaadayso u-qalmitaanka shaqada. Shuruudaha caadiga ah waa (a) haysashada shahaadada qalin-jabinta ee loo baahan yahay, (b) helay waayo-aragnimo la kormeero, iyo (c) ku aflaxa imtixaannada qoran iyo afka ah ee ku saabsan shaqada iyo arrimaha anshaxa.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah ee dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee Kanada waa $75,742 iyo cilmu-nafsiga heerka sare ee caafimaadka (8+ sano oo waayo-aragnimo ah) wuxuu kasbadaa celcelis ahaan $ 93,929.
5) Imaaraadka Carabta
Isutagga Imaaraadka Carabta, ama UAE, waa waddan ku yaal Jasiiradda Carabta ee xeebta koonfur-bari. Dalkan oo u dhexeeya Cumaan iyo Sucuudiga ayaa caan ku ah saxaraha dhagxaanta leh, dhul qoyan, buuro aan biyo lahayn, iyo xeebo ku teedsan gacanka Cumaan iyo gacanka Faaris.
Imaaraatka dhaqaalihiisa waxa uu inta badan ku dhisnaa kalluumeysiga iyo ganacsiga luulka ka hor inta aan la helin shidaalka bartamihii qarnigii 20-aad. Dhaqaalaha dalka ayaa si weyn isu bedelay markii dhoofinta saliidda ay bilaabatay 1960-kii. Wax soo saarka guud ee Imaaraadku qofkiiba waxa uu hadda la mid yahay kuwa hormoodka u ah waddamada Galbeedka Yurub.
Dhakhaatiirta cilmi-nafsiyeedka caafimaadku waa inay sii wadaan shatiga xirfadeed ee Maamulka Caafimaadka Dubai oo ay u hoggaansamaan shuruucda loo baahan yahay iyo shuruudaha maamulka. Celceliska mushaharka sanadlaha ah ee dhakhaatiirta cilmu-nafsiga ee Dubai waa $67,261 iyo cilmu-nafsi heer sare ah (8+ sano oo waayo-aragnimo ah) wuxuu kasbadaa celcelis ahaan $ 83,825.
Shiinaha waa wadan aad u weyn oo leh dhul aad u kala duwan, oo fidsan 3,100 mayl (5,000 kiiloomitir) bari ilaa galbeed iyo 3,400 mayl (5,500 kiiloomitir) waqooyi ilaa koonfur. Buuro, taargo dhaadheer, saxare bacaad ah, iyo geedo dhaadheer ayaa ka kooban dhulkeeda.
Buuruhu waxay daboolaan saddex meelood meel meel dhulka Shiinaha. Buurta Everest, oo ah meesha ugu sarreysa adduunka, waxay ku taal xadka u dhexeeya Shiinaha iyo Nepal. Shiinaha ayaa leh tirada ugu badan ee waddan kasta oo meeraha ku yaal, waxaana ku nool 1.3 bilyan oo qof. Magaalooyinku waxay hoy u yihiin saddex meelood meel dadweynaha. Dadka intiisa kale waxay ku nool yihiin baadiyaha.
Shiinuhu waa mid ka mid ah xadaaradaha aduunka ugu faca wayn, laakiin waxa dhawaan loo aqoonsaday wadan “casri ah”. Shiinuhu si xawli ah ayuu isu bedelay marka loo eego wadamada kale ee aduunka 20-kii sano ee la soo dhaafay.
Daawaynta cilmi nafsiga ayaa aad looga baahan yahay Shiinaha, oo ay ku nool yihiin ku dhawaad ​​1.4 bilyan oo qof. Si kastaba ha ahaatee, hal sabab oo aasaasi ah, cilmu-nafsiyeedka inta badan ma awoodaan inay caawiyaan buuxinta baahida: 2013, xeer cusub Waxa ay dhaqan gashay in, waxyaabo kale, ay xaddidayso awoodda cilmi-nafsiga Shiinaha ee dhul-weynaha Shiinaha si ay u bixiyaan teraabiyada cilminafsiga.
Dhakhaatiirta cilminafsiyeedka waa in ay isu sheegaan lataliyeyaal oo ay ku xaddidaan adeegyadooda la-talinta iyo taageerada nafsaaniga ah ilaa ay ka hawlgalaan isbitaallada macaamiishooda kuwaas oo ay horay u soo sheegeen dhakhaatiirta dhimirku.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah ee dhakhaatiirta cilmu-nafsiga ee Shiinaha waa ¥242,966 iyo dhakhtar cilmi-nafsi oo heer sare ah (8+ sano oo waayo-aragnimo ah) ayaa qaata celcelis ahaan mushaharka ¥304,553.
United States of America (badanaa loo yaqaan USA ama si fudud US waa dalka sadexaad ee aduunka ugu wayn dhul ahaan (kadib ruushka iyo kanada) iyo dadka (kadib Shiinaha iyo Hindiya).
Dalka waxa dhanka galbeed ka xiga Badweynta Baasifigga iyo bari ee Badweynta Atlaantigga. Waxay ku taal Waqooyiga Ameerika. Kanada waxay ku taal xuduudka waqooyi, halka Mexico ay ku taal koonfurta. Waxaa jira 50 gobol oo lagu daray Degmada Columbia ee Mareykanka.
Niyad-jabka, qabatinka maandooriyaha, iyo cabsida kale, cuqdadda, iyo welwelka caafimaadka dhimirka ayaa saameeya malaayiin Maraykan ah. Sida laga soo xigtay Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada, qiyaastii 25% dhammaan shakhsiyaadka ku nool Mareykanka waxay qabaan cudur maskaxeed hal daqiiqo, iyo 50% dadka Mareykanka ah ayaa ku dhici doona hal mar noloshooda.
Dhakhaatiirta cilminafsiyeedka ayaa door muhiim ah ka ciyaara caawinta shakhsiyaadka wax ka qabashada arrimahan caadiga ah. Celceliska mushaharka sanadlaha ah ee dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee Ameerika waa $85,340 iyo cilmu-nafsiga heerka sare ee caafimaadka (8+ sano oo waayo-aragnimo ah) wuxuu kasbadaa celcelis ahaan $125,000.
Switzerland, oo ah waddan aan bad lahayn oo leh buuro dhaadheer, harooyin dhaadheer oo Alpine ah, dooxooyin caws leh oo ay ka buuxaan beero hagaagsan iyo tuulooyin yaryar, iyo magaalooyin horumarsan oo isku dhafan kuwii hore iyo kuwa cusub, waa isku xirka joqraafiga jireed iyo dhaqameed ee kala duwan ee galbeedka Yurub, oo caan ku ah quruxda dabiiciga ah labadaba. iyo hab nololeedka.
Labaduba waxay noqdeen hal-ku-dhegyo qaranku leeyahay, kuwaas oo magacoodu uu kiciyo aragtiyo ku saabsan buuraha barafka leh ee Alps ee ay jecel yihiin qorayaasha, rinjilayaasha, sawir qaadayaasha, iyo taageerayaasha ciyaaraha dibadda ee adduunka oo dhan.
Celceliska mushaharka sannadlaha ah ee dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee Iswisarland waa $96,531 iyo cilmu-nafsiga heerka sare ee caafimaadka (8+ sano oo waayo-aragnimo ah) ayaa qaata celcelis ahaan mushaharka $ 119,376.
Qatar, waa mid ka mid ah dalalka ugu yar laakiin ugu awoodda badan gacanka Faaris, waxay ka helaysaa macluumaad aad u xiiso badan iyo waxyaabo soo jiidasho leh oo la arko oo la sameeyo. Waa mid ka mid ah dalalka ugu qanisan adduunka, waxaana uu martigelin doonaa Koobka Adduunka ee FIFA markii ugu horeysay sanadka 2022.
Sida laga soo xigtay Hay’adda Lacagta Adduunka ee IMF. Qatar qofkiiba GDP waa $130,475. Iyadoo $116,808 ay ku jirto kaalinta labaad, Luxembourg ayaa aad u fog. In kasta oo ay juqraafi ahaan ka yar tahay Yorkshire, haysashada gaasta dabiiciga ah ee saddexaad iyo kaydka saliidda ayaa hubaal ah inay caawiso.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah ee dhakhaatiirta cilmu-nafsiga ee Qatar waa $150,233 iyo dhakhtarka cilmu-nafsiga heerka sare (8+ sano oo waayo-aragnimo ah) ayaa qaata celcelis ahaan mushahar dhan $237,297. Khabiir cilmi-nafsiyeedka ugu mushaarka badan ayaa laga heli karaa Qatar mana jiro wax muran ah oo arrintaas ka dhashay.
Dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee kiliinikada waxay baadhaan welwelka maskaxda, shucuureed, iyo caafimaadka dabeecadda waxayna bixiyaan daaweyn daweyn. Shakhsiyaadkani waxay si joogto ah ula socdaan, qiimeeyaan, u falanqeeyaan, oo u dejiyaan daawaynta cudurrada kala duwan sida cilmi-baarayaal iyo daaweeyayaal.
Adduunka oo dhan, dhakhaatiirta cilmi-nafsiga ee kiliinikada ah ee ugu mushaharka badan waxa lagu bixiyaa xaddi kala duwan iyo marka loo eego go'aammo kala duwan sida heerarka waxbarashada iyo baahida adeegyadooda.
Britannica - Cilmi-nafsiga bukaan-socodka
CPA – Inaad noqoto cilmi-nafsi yaqaan
Waa Kuwee Naqshadayaasha Ciyaaraha Fiidiyowga Ugu Lacagta Badan? | Dalalka Ugu Fiican
Sidee Silsiladda Bixinta Amazon u Shaqaysaa 2022 | Tilmaan Buuxo
13 Siyaabood oo Lacag looga Sameeyo Hantida Ma guurtada ah iyada oo aan lacag la hayn 2022
43 Xigasho Cusub oo Ku Saabsan Adkeysiga 2022 -ka
In aad adkeysi yeelato waxa ay la macno tahay in iimaanka la ilaaliyo oo aad ku adkaysato dhibaatooyinka iyo hubanti la'aanta. Adkeysigu waa waxa…
13-ka Shaqo ee ugu Mushaarka badan Bangiyada
Shaqooyinka bangiyada waaweyn waxay noqon karaan kuwo faa'iido leh. Taasi waxay ka dhigan tahay inay baahi weyn u qabaan, oo leh shuruudaha gelitaanka sida…
10 Meelaha ugu Wada-Shaqaynta Fiican Pune (2022)
Pune, dhisidda aasaaska markii ugu horreysay waxay noqon kartaa cabsi. Wax fikrad ah kama haysatid dariiqa…
Waa Kuwee Darawalada Nascar Ee Lacagta Ugu Badan Bixiya? | 15 Darawalada Nascar ee ugu Fiican
Darawaliinta xirfadlayaasha ah ee NASCAR waxay ku dadaalaan inay ku guuleystaan ​​tartamada iyagoo sameynaya go'aano laba-labaad ah oo xawaare ka badan 200MPH. Darawalada NASCAR waa…
20 -ka Barnaamijyada ugu Wanaagsan ee Android ee aan la aqoon sannadka 2022 | Sahanka Guud
Android waa nidaamka ugu weyn ee furan ee nidaamka hawlgalka mobile mas'uul ka ah awood u badan oo qalab casriga ah iyo tablets. Sababtoo ah…
Sida Loo Joojiyo Kharashaadka Lacagta: 10 Caadadood Waa inaad Hadda Joojisaa
Kharashka aan raadka lahayn ma fududa in la joojiyo maadaama ay caado yeelato ka dib markii aad muddo dheer samaysay…